Waterproof Camping Tent, Ihi ụra akpa, Picnic blanket, Beach towel - Green Camping
maa ụlọikwuu n'ụlọikwuu
ngwa akọrọ towel
ọhụrụ mpaghara iche & njikọ pas
Elu àgwà ultralight Mama akpaihiura
Ma a tent bụ waterproof na-abụghị nanị metụtara otú mmiri kọlụm nke ákwà, ihe kacha mkpa bụ imewe na rụọ ya. Ọ na-ada mfe, ma, nza nke ulo-ikwū na ahịa bụghị waterproof, ọbụna ọ kwuru mmiri kọlụm 5000mm. Daalụ maka ime ụlọ mmiri ozuzo ule ngwá, nke eme ka o kwe nwere ìhè mmiri ozuzo na oké ifufe na oge obula, ọ na-enyere anyị aka ịhụ ihe ọ bụla na-eri eri ga-ekwe omume iji hụ na anyị na-enwe ike iji na-emepụta zuru ezu waterproof tent.
Gịnị bụ akwa akwa ewu gị na-ehi ụra akpa? Bụ na o kwesịrị ekwesị nke ọma n'ihi na gị nzube? Ndi gị soplaya gwara gị nke na-ewu na-eji maka gị na-ehi ụra akpa na atụmatụ nke ọ bụla na-ewu? Nọmalị, e nwere 2 dị iche iche rụrụ na ahịa, ndị H ulo na abụọ H chamber.The H Chamber bụ mfe ọtụtụ ewu ewu ewu, ikwa shei, mkpuchi na lining ọnụ ozugbo. Nke a na-ewu na-emekarị na-eji maka okpomọkụ-spring ụdị.
Ị maara otú ọtụtụ n'ígwé nke gị picnic blanket, ihe bụ n'ime? Gịnị bụ atụmatụ nke ọ bụla dị iche iche picnic blanket? Ọ nkịtị na-eme otú a. Acryli, Polar ajị anụ & biri ebi polyester dị ka n'elu ihe, Pee & aluminum foil, PEVA, waterproof Oxford ka ala. Ogbo & polyester eriri dị ka n'etiti ihe onwunwe. Ụfọdụ n'ime picnic blanket naanị nwere 2 n'ígwé. Ị nwere ike ịchọta dị iche iche ihe na ahịa, maka anyị, ọ bụ na ọ dịghị nsogbu. Anyị na-emepụta ihe karịrị 1,000,000 dị iche iche picnic blanket, m obi ike ahụ anyị nwere nri ihe maka ị. Maka ozi ọzọ, biko na Ajụjụ ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.